Home News MW Sharif Xassan oo kulankii maanta ka sheegay in uu markale yahay...
MW Sharif Xassan oo kulankii maanta ka sheegay in uu markale yahay Musharax
Kulankii qadada ahaa ee uu maanta Sharif Xassan u sameeyay xildihibaanada iyo Sanetors ka tirsan labada aqal ee Federaalka ayaa waxaa soo xaadiray 27 qof. Kulankaan ayaa Sharif Xassan ku sheegay in uu yahay markale Musharax u tartamaya Kursiga Madaxweynaha ee dowlad Gobleedka Koonfur Galbeed. Sharfif Xassan ayaa ka codsaday Xildhibaanada in ay taageeraan oo ay qayb ka noqdaan soo noqoshadiisa. Hadalkaas ayaa ahaa mid aan si xiiso leh loo soo dhawaynin. Xildhibaanada qaar ayaa ku eedeyay in uu hortaagan yahay in doorasho xalaal ah ka dhacdo deegaanka Koonfur Galbeed. Doorashada waxaa ka hartay mudo sadax bilood ah mana jirto tilaabo ilaa hadda la qaaday oo ay u horeeyso magacaabista gudiga doorashada. Sida dad badan saadaalinayaan waa ay adkaan doontaa in Sharif Xassan ku guulaysto doorasho Xalaal waxaana ay u badan tahay in uu danbiishiisa kala soo bixi doono qayaanadii ugu danbeeysay ama uu hawada siyaasadda Soomaaliya uga bixi lahaa ama uu dib ugu soo noqon lahaa.
Previous articleMW Farmaajo oo ka leexleexanayo in uu saxiixo fulinta amarka dilka oo ay Maxkamadu amartay? Sabab?
Next articleDowladda Maraykanka ayaa dar-dargalinayso howl-galada ka dhanka ah kooxda Al Shabaab